वकील दिवस - यो विशुद्ध छ पेशेवर छुट्टी, पहिले नै वर्ष हाम्रो देशमा त्यहाँ गरिएको छ को धेरै छ जो। यो घटनाको लागि हामी तयार दिन मा बधाई Themis को सेवकहरूको लागि वकील, र तिनीहरूलाई खुसी र incorruptible हेर्न चाहन्छु। यो छुट्टी मा, हामी तिनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र काम सबै भन्दा राम्रो इच्छा। आफ्नो घनिष्ठ मित्र वा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले पेशा प्रतिनिधिको छन् भने, त्यसपछि वकील को दिन मूल एसएमएस-बधाई तिनीहरूलाई पठाउन। हामी तिनीहरूले कला मा "गंभीर" संग खुसी हुनेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। हरेक स्वाद को लागि छोटो विकल्पहरू चयन र आफ्नो परिवार वा साथीहरूसँग तिनीहरूलाई दिने। तिनीहरूले तपाईंलाई सधैं तिनीहरूलाई सम्झना कि धेरै खुसी हुनेछन्। वकील को दिन मा आफ्नो बधाई धेरै निष्कपट हुनेछ, गरौं उदाहरणका लागि, यस्तो:
मेरो प्रिय! आज, आफ्नो व्यावसायिक छुट्टी मा, म तपाईं नै इमानदार र सभ्य व्यक्ति रहन चाहनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा तिनीहरूलाई वरिपरि मानिसहरू कसरी। म यस्तो र तपाईं संग उनको जीवन लिङ्क कि खुसी छन् भन्ने तथ्यलाई गर्व छु। म धेरै वर्ष म मात्र, तपाईंलाई धन्यवाद दिनेछु भन्ने विश्वास गर्छन् तर तपाईं भयो जो पनि मान्छे सामना।
प्रिय! एक पटक तिमी मलाई आफ्नो हृदय दिए, र अब, तपाईंको व्यावसायिक छुट्टी मा, म थकित तपाईं प्रेम र कृतज्ञता शब्दहरू बारम्बार प्राप्त छैन। आफ्नो पेशा बाबजुद, तपाईं अझै पनि एउटै स्त्री र आकर्षक दिनमा रूपमा म भेट्दा छन्। आफ्नो काम तपाईं आनन्दित गरौं, र म कडा मा यो तपाईं योगदान हुनेछ।
आमाबाबुले लागि वकील को दिन मा बधाई:
मेरो प्रिय पिताजी! म वकील को दिन मा तपाईं बधाई। म हल्का मामलाहरु र "दीर्घ" को प्रारम्भिक पूरा इच्छा। आफ्नो सबै काम समस्या सफलतापूर्वक अन्त गरौं, र हामी घर मा तपाईं बढी हेर्न र उपहार को सबै किसिमका प्रसन्न छौँ।
हाम्रो प्रिय आमा!
तपाईँको व्यावसायिक छुट्टी आए छ। एक वकील, त्यो सुरक्षा र आफ्नो सबै भन्दा कठिन दिन मानिसहरू गर्छ - यी सबै वर्ष, हामी हाम्रो आमा भनेर गर्व छन्। किनभने तपाईं शीर्ष सधैं हुनुपर्छ रूपमा सुन्दर, रहनुहोस्। आफ्नो महान कारण मा सकेसम्म पासो रूपमा सानो पाइन्छ कि मानौं। तपाईं - सबै भन्दा राम्रो!
वकील जस्तै हुन सक्छ को दिन बधाई:
छोरा, हामी तपाईंलाई बधाई! तपाईं एक धेरै जिम्मेवार पेशा र ठूलो जिम्मेवारी गरे। आफ्नो छुट्टी, हामी, आफ्नो परिवार मा, हामी तपाईंलाई आफ्नो क्षेत्र र मानव destinies को उचित arbiter मा एक सुपर-व्यवसायीक बन्न चाहनुहुन्छ। न्याय आफ्नो होस् credo। हामी तपाईंलाई यो खिलवाड बिना जीवनको वकील को गर्व शीर्षक मर्यादा संग बोक्न गर्न चाहनुहुन्छ। बधाई छ!
प्रिय छोरी! हामी तपाईंका आमाबाबुले तपाईंलाई यो पेशामा छान्नुभएको गर्व हो, र हामी यो उत्सव तपाईं गर्व जीवनको जाने इच्छा चाहन्छु। के तपाईं आनन्द दिन्छ गतिविधि गरे। फेयर र जसले तपाईंलाई आफ्नो गाह्रो भाग्य भरोसा मानिसहरूलाई सेवा गर्छन्। हामी तपाईंलाई विश्वास!
हामी आफ्नो मित्र मनोरन्जन गर्नु तपाईं आफ्नो वकील रमाइलो भएकोमा बधाई प्रस्ताव गर्न चाहनुहुन्छ:
प्रिय comrade र मित्र। मान्छे - यो राम्रो सुनिन्छ, तर तपाईं एक हुनुहुन्छ - एक वकील, र एक डबल गर्व आफ्नो मेरो हृदय भरिन्छ। चोरी छैन - यो तपाईं को लागि छैन; रिश्वत लिने छैन - ठेगानामा छैन। तपाईं के को लागि रहन, एक राजधानी पत्र संग एक वकील छ। एक छुट्टी मा बधाई छ!
त्यो दिन मा, तपाईं व्यवस्था एकेडेमी को ढोका बन्द गरेपछि जब छ, हाम्रो देश नयाँ Plevako स्कर्ट हासिल गरेको छ। उहाँले तपाईंलाई अघि सम्म भए तापनि उहाँले एक महिला तर्क र अंतर्ज्ञान छैन किनभने गर्नुभयो। म तपाईंलाई बधाई र व्यवस्थामा Plevako पार गर्न चाहनुहुन्छ।
सहकर्मी लागि वकील दिवस मजा बधाई:
यो केवल एक सपना छ - कुनै कुरा चिन्ता कति, सबै कुनै कुरा कसरी एक्लै सपना धेरै, कुनै पनि पैसा बनाउन छैन। बधाई छ, प्रिय सहकर्मी! भाग्य तपाईं दया लिन र यस्तो Pugachev र Berezovsky को रूपमा ग्राहकहरु पठाउन गरौं। राम्रो मज्जा को हुन, हामी तपाईँलाई coolest ग्राहक इच्छा।
वकील को दिन मा बधाई सबै यो संलग्न ती लागि एक सुखद आश्चर्य हुनेछ गरौं।
राज्य, व्यावसायिक, अर्थोडक्स - नोभेम्बर मा बिदाहरू
आफ्नो व्यावसायिक छुट्टी मा सहकर्मियहरुलाई सुन्दर र असामान्य बधाई
केही अवस्थामा मा, दुखेको पेट बटन?
काठ बनेको पर्खाल प्यानल - एक सुन्दर भित्री
रेस्त्राँका लागि सीलका लागि ग्रीष्म जाल: अवलोकन, योजनाहरू, वर्णन र समीक्षाहरू
रूसीमा सर्तहरू के हुन्: उदाहरणहरू
टेरी Rodgers: छोटो जीवनी, प्रदर्शनियों र काम